टिप्स » Home
यस्ता छन् अनुहारको दाग कम गरी चम्किलो बनाउने तरिका !
अनुहारको दाग कम गरी चम्किलो बनाउने केही तरिका एजेन्सी । शुन्दर अनुहार बनाउन मानीसहरु अनेकौं केमीकलयुक्त शौन्दर्य साधनहरु अपनाउने गर्दछन् ।तर घरमै उपलब्ध घरेलु चीजको प्रयोग गरेर पनि अनुहारमा चमक र ताजगी ल्याउन सकिन्छ । –दुई चम्चा जौको धूलोमा कागतीको रस मिसाई पेस्ट बनाएर दाग भएको ठाउँमा लगाउने गर्नुपर्छ.....
“घामले डढेको” छाला कसरी सुन्दर बनाउने, यस्ता छन “११ उपाय”
गर्मी मौसम सुरु भइसकेको छ । यो समयमा स्विमिङ पुल, सामुद्रिक किनार, पिकनिक र अन्य बाह्य गतिबिधिमा जान मन पराउँछन् । तर, योसँगै घाममा डढ्ने समस्या पनि आउँछ । घाममा ड्ढ्नबाट बच्न वा डढिसकेको छालालाई जोगाउन निम्न उपाय अप्नाउन सकिन्छ : – छालालाई चिसो र शान्त बनाउन दिनमा दुई पटक चिसो पानीले नुहाउनुहोस् । यसले.....
अनुहार चम्किलो बनाउने १० घरेलु तरिका हेर्नुहोस !
अनुहार चम्काउन मानिसहरु सौन्दर्य प्रसाधनमा हजारौं खर्च गर्छन्। ब्युटी पार्लर धाउँछन्। तर कतिपय यस्ता सामग्रीले अनुहार कुरुप बनाएका थुप्रै उदाहरण पनि छन्। मापदण्डभन्दा बढी केमिकल राखिएका सामग्रीले रोगको शिकार पनि बनाएका छन्। तर साइडइफेक्ट नहुने र घरमै सहजै पाइने तरिकाप्रति भने सौन्दर्यका पारखीहरुको.....
काठमाण्डौ - यो समयमा फेसबुक नचलाउने को होला र ? हिजोआज फेसबुकलाई आफ्ना गतिविधि पोस्ट गर्न, आफन्त तथा साथीभाईसँग च्याट गर्न, भिडियो अपलोड गर्न प्रयोग गरिन्छ । युवाहरुलाई समय बिताउनका लागि यो निकै राम्रो प्लेटफर्म पनि बनेको छ । तर फेसबुकका गुणहरु यतिमा मात्र सीमित छैनन्, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने फेसबुकबाट.....
केही मिडिया रिपोर्ट अनुसार नायिका सेलिना जेट्लीले दोस्रो पटक जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिँदैछिन् । दोस्रो पटक पनि जुम्ल्याहा सन्तानकी आमा बन्न लागेकोमा आखिर किन र कसरी कोही महिलाले एकभन्दा बढि सन्तान जन्माउँछन् । यस प्याकेजमार्फत यससम्बन्धि विभिन्न प्रश्नबारे जानकारी दिइँदैछ । जानी राखौ :- के.....
चुम्बन कति प्रकारको हुन्छ, थाहा पाउनुहोस
अधर चुम्बन यो चुम्बन एउटा सामान्य बौद्धिक चुम्बन हो । यो सामान्यत: साथीलाई गरिन्छ । यद्यपि यो प्रेमीलाई गरिने चुम्बनको सुरुवात पनि हुनसक्छ । हातमा चुम्बन हातको पछाडि तथा औंलाको बीचमा गरिने चुम्बनले प्रशंसालाई बुझाउँछ । यो पनि एक प्रकारले सामान्य र सभ्य चुम्बन हो । एस्कियो चुम्बन यो मायालु खालको.....
तपाईले थर लेख्नुहुन्छ तर थर कसरी रहन गयो थाहा छ? पढ्नुहोस
खसजातिका धेरै थरहरु छन् । ती थरहरु केही सरकारी दर्जाबाट, केही गाउँको नामबाट अपभ्रंश भएर बनेका हुन् । अधिकारी, कार्की, भट्ट जस्ता थर सरकारी दर्जाबाट उत्पन्न भएका हुन् भने कोइराला, रिजाल, पराजुली जस्ता थरहरु कर्णाली अञ्चलका गाउँहरुबाट उत्पति भएका हुन् । आफ्नो थर के हो र कसरी उत्पति भयो भन्ने जिज्ञासा छ भने.....
खर्च ब्यवस्थापन गर्न नसके जति कमाए पनि प्रगति हुन सक्दैन, यसरी खर्च म्यानेज गर्नुहोस
बढ्दो महङ्गीले जो कोहीलाई पनि तनाव हुन सक्छ । नेपालको परिपेक्षमा आर्थिक रुपले सबल एंव सक्षम हुनको लागि अप्ठरो छ । त्यस्तो अवस्थामा अझ घर परिवार तथा व्यवहार चलाउने कुरा कुनै परिवारलाई आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो नै बन्न समेत पुग्न सक्छ ।यो समस्या नेपालको मात्र नभएर विश्व भरी रहेका मानिसहरुको हो । जसले.....
हिन्दु धर्मका अनुसार ५ खराव बानिहरु जसले तपाईलाई धन कमाउन दिदैन
हरेक व्यक्ति धन कमाउन चाहन्छ र त्यसका लागि दिनरात मेहनत गरिरहेको हुन्छ । तर, धेरै मानिस सफल हुन सक्दैनन् । उनीहरुको गुनासो हुन्छ– यतिधेरै मेहनत गर्दा पनि मनले चाहेको सफलता हासिल गर्न सकिएन । यसको कारण तपाईंका केही बानी पनि हुनसक्छन् । सुन्दा सामान्य लाग्ने बानी पनि धनकी देवी लक्ष्मीको लागि अनुचित लाग्न.....